Sida loo kala shaandheeyo sawirada Adobe Illustrator, fudud oo dhakhso leh | Abuurista khadka tooska ah
Markaan vector nahay, waxa aan sameyno ayaa u badalno sawir ku jira bitmap, tusaale ahaan jpg ama qaabka png, oo loo beddelo muuqaal vector (SVG). Taasi waa in la yiraahdo, waxaan u badalnaa pixels vector.
Ku shaqeynta sawirada vector waxay leeyihiin faa iidooyin gaar ah, kuwan waa la miisaami karaa iyada oo aan wax dhalanrog ah waxayna diyaar u yihiin in wax laga beddelo. Casharkaan, waxaan kuu sheegeynaa sida aad u kala saari kartid sawirrada adoo adeegsanaya Adobe Illustrator. Marka hore, waxaan vector-ka ka dhigi doonnaa sawir, ka dibna waxaan ku soo celin doonnaa hawsha sawir.
1 Muuji sawir
1.1 Abuur sabuurad cusub iyo sawir furan
1.2 Ku dhaqaaji galka «sawirka baafinta» kuna dheji sawirka
1.3 Ka dhig vector-kaaga mid wax laga beddeli karo oo ka saar asalka
2 Maxaa dhacaya markaan sawir dulqaadno?
Abuur sabuurad cusub iyo sawir furan
Aynu ku bilowno sameynta sabuurad farshaxan oo cusub Sawirka, taasna waa inaad gujisaa «Fayl», xagga kore ee shaashadda, oo xulo "cusub". Waxaan ka dhigayaa cabirka A4 waxaanan dhigayaa si jiq ah.
Kadib waxaan fureynaa sawirka. Waxaad ku samayn kartaa saddex siyaabood:
Si toos ah sawirka uga jiidaya galka
Riixitaanka> faylasha> meel
Adoo adeegsanaya taliska wareejinta toobiye
Waxaan ka soo dejistay wax sawir ah internetka waana midka aan isticmaali doono. Haddii aad fiiriso oo aad si weyn u dhaweyso, waxaad arki doontaa in sawirku leeyahay pixels, markaan tijaabinayno pixels-yadaas way baaba'ayaan. Waxaan ku soo koobi doonaa sawirka si aad u aragto isbeddelada iyo khilaafaadka, laakiin haddii aad rabto, waad ka boodi kartaa tallaabadan.
Ku dhaqaaji galka «sawirka baafinta» kuna dheji sawirka
Hadda aan fureyno "baafinta sawirka" guddiga, oo laga yaabo inaad qarinaysay Si aad u sameysid boodhadh iyo aalado ka muuqda Sawirka waa inaad ku hawlgelisaa tabka "daaqadda" (liiska kore). Marka waxaan aadeynaa "daaqad" iyo dhammaan xulashooyinka waxaan dooran doonaa "baafinta sawirka".
Guji Sawirka, iyo qeybta baafinta sawirka, waxaan dooran doonnaa qaabka "midabka". in "daawo", waa inaad dooratay "Raadinta natiijada". Xagga sare, waxaad haysataa ikhtiyaar oranaya "Horudhac" iyo liiskaas yar waxaad haysataa fursado badan oo aad kala dooran karto. Doorashada mid ama tan kale waxay ku xirnaan doontaa heerka saxda waxaan raadineynaa adigoo u bedelaya sawirka bitmap-ka muuqaal vector ah. Aan aragno qaar ka mid ah:
Marka laga hadlayo xulashooyinka 3, 6 iyo 16 midabo Waxaa loola jeedaa xadka ugu badan ee midabka in loo adeegsado natiijada raadinta. Haddii aad dalbato 16 midab waxaad ku arki doontaa in sawirkan aan ka helayno natiijo aad u wanaagsan. Haddii aan haddaba hoos ugu dhaadhacno illaa 6 midab waxaan luminaynaa faahfaahinta qaar haddii aan hoos ugu dhaadhcanaana 3 ka sii badan. Adoo riixaya isha, oo ku taal midigta baafinta baafinta sawirka agteeda xulashada "muuqaalka", waxaad awoodi doontaa inaad aragto farqiga u dhexeeya sawirka isha iyo baafinta aan hadda haysano. Fogee oo waad arki doontaa in pixels-ka mar hore la waayey.
Sawiro hi-fi ah iyo dejinta sawir-qaadaha ayaa badanaa la adeegsadaa markaan sawirno leenahay ama sawirro leh faahfaahin badan, oo loogu talagalay sawirada sida ugu fudud tan looma baahna. Waad codsan kartaa, haddii aad dalbatid, tusaale ahaan, "sawir daacadnimo oo hooseeya" sidoo kale waxay u muuqan doontaa fiicnaan.
Waxaa jira qaabab kale oo badan iyo qaabab kale. Haddii aad doorato qaabka "grayscale" ama haddii "presets" aad ku dalbatid "daahyada midabka cawliga ah" waxaad heli doontaa vector midabkiisu midabkiisu yahay cawl. Xulashada qaabka "madow iyo caddaan" ama "jaantus garaafka ah" horay ayaa loo abuuri doonaa nooc sawir ah.
Hadda waxaan dooraneynaa "16 midab" dejinta.
Ka dhig vector-kaaga mid wax laga beddeli karo oo ka saar asalka
Waxaan horey uheysan laheyn sawirka vektorka, laakiin hada waxaan ku tusayaa a khiyaanayso si aad si dhakhso leh u beddeli karto oo aad u tafatiri karto. Markaynu leenahay muuqaal vector ah oo lagu abuuray Sawirqaade, sida xidigtaan tusaale ahaan, adoo adeegsanaya aaladda "xulashada tooska ah" waxaan dooran karnaa qodobbada barroosinka waxaanan u beddeli karnaa sida aan doono. Dhanka kale, haddii aan siino vector-ka aan abuurnay, waxba ma qaban karno.
Si aad u xalliso, dooro sawirka, iyo liiska kore, tag shay> ballaadhi. Liistada furi doonta, waxaan calaamadeyn doonnaa "shay" iyo "buuxin". Qalabkan, waxa aan ku guuleysaneyno waa inaan u qeybinno shay dhammaan walxaha ka kooban, si aan ugu beddelno mid walbaa madax-bannaanidiisa. Waan tirtiri karnaa walxaha, beddeli karnaa midabada, dhaqaajin karnaa, kor u qaadi karnaa ...
Tani waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad tirtirto asalka vektorka. Haddii aad sawirka ka degto sabuuradda, waxaad arki doontaa inuu leeyahay taariikh cad, sidaad u codsatay "ballaadhi", qalabka tooska ah ee xulashada, waxaad dooran kartaa asalka oo ka saari kartaa si fudud adigoo gujinaya furaha dhabarka dambe ee kumbuyuutarka .
Maxaa dhacaya markaan sawir dulqaadno?
Qeybtaan casharka ah, waxaan ku doortay sawir xallinta aad u sarreeya, dhab ahaantii, waa inaan weyneeyaa wax badan si aan u kala sooco pixels-ka. Nidaamku hadda sidiisa ayuu noqonayaa. Waxaan codsan doonnaa "baafinta sawirka", laakiin markan halkii aan horay uga sii ahaan lahayn 16 midab waxaan siin doonnaa sawirka aaminnimo sare.
Haddii aad dooratay sawir sidaan oo kale u weyn waxay u badan tahay inaad heleyso fariin kaa codsaneysa inaad sawirka kor u qaaddo in lagu dabaqo raadinta. Si loo xoojiyo sawirada, waxaan bixinnaa «Ujeedo» (tab ku yaal liiska kore)> «ku soo koobto».
Waxaa suurtagal ah, jaleecada hore ma arki doontid wax isbeddel ah, laakiin hadda waxaan ku dabaqi karnaa hagaajinta sawirka Aaminnimo sare. Markaad dalbatid, dhaweyso si aad sifiican u aragto, waxaad arki doontaa inaan abuurnay nooc ka mid ah hyper rinjiyeyn macquul ah. Haddii halkii aad ka heli lahayd sawir daacadnimo sare ah aad dalbatid Sawir daacadnimo oo hooseeya, saamaynta sawirkani waa la sii xoojin doonaa.
Adoo gujinaya "ballaadhi", sidii aan ku samaynay tusaalihii hore, waxaan sixi karnaa qaybo ka mid ah sawirka oo aan in badan naga dhaadhicin, xitaa waan u burburin karnaa si aan u abuurno halabuurro aan la taaban karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Sida loo kala shaandheeyo sawirada Adobe Illustrator
Nidaamiyaha hore ee Adobe Photoshop ayaa ugu dambeyntii yimid